ရန်ပိုင်| October 31, 2012 | Hits:12,903
ရာဇာ October 31, 2012 - 5:21 pm သေသေချာချာ နဲ့ တိတိကျကျ လုပ်ချင်ရင် စက်ရုပ် ဝန်ထမ်းတွေ ထားမှ ရမယ်..လူဝန်ထမ်း ကို ထားလို့ ကတော့ ကြိုက်တဲ့ ဥပဒေ လာခဲ့ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်….ပြောနေကြတာလဲ ကြာပါပြီ…လုပ်တိုင်းလဲ မဖြစ်တော့ ရတာလေး ယူပြီး ပါးစပ်ပိတ် အိမ်ပြန်ကိုသာ ပြန်ပြီး အိပ်နေကြပါတော့……လုပ်ကြတိုင်းလဲ သွားကြားထိုးတံ လိုဘဲ အဖျားရှုးရှုး သွားတယ်…..မြန်မာပြည် နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကတော့ မျက်မမြင် အပ်ထိုး နေသလိုပါဘဲ…
Reply ungng October 31, 2012 - 6:58 pm ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Reply FOX November 1, 2012 - 10:11 am ဖမ်းတော့မည်…ဘယ်တော့လဲ???
Reply thura zaw hein November 1, 2012 - 3:27 pm စံနစ်အားလုံးဟာ ဗမာပြည်မှာ ၈၈ နောက်ပိုင်း အစိုးရဖောက်တဲ့လမ်းတွေလိုပါပဲ။
Reply kumudra November 1, 2012 - 5:15 pm My comment under this article was not seen here, any error?
Reply nay myo November 2, 2012 - 3:02 pm အဲဒီအဖွဲ့က အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းတွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ယာဉ်တွေကို မစစ်ဆေးသေးဘဲနဲ့ အရင်ဆုံး ကားဂိတ်တွေ/ကားသမားတွေ/ကယ်ရီသမားတွေကို စစ်ဖို့လိုပါတယ်. အလကား သယ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး . သူတောင်းစားပေးသလိုပေးပြီးမှသယ်ဆောင်လာရတာပါ. ဒီကြားထဲလိုင်းကြေးနည်းရင် အဖမ်းခံရမယ့်စာရင်းထဲပါသေးတယ် . လစဉ်ကြေးကိုပြောတာပါ . ပြည်သူတွေကတော့ နာပြီးရင်းနာပေါ့ခင်ဗျား.. အဲဒီလိုင်းကြေးကို ဘယ်အဖွဲ့တွေကိုပုံမှန်ပေးဆောင်နေရသလဲဆိုတာ အရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်….
Reply aung nge November 15, 2012 - 8:42 pm သူတောင်းစားပေးသလို မဟုတ်ပါဘူး
Reply Maung Maung November 2, 2012 - 8:51 pm Yeah!! The FDA department may exist in 105 miles checkpoint, so we must pay money for another new negotiator for passing our no duty fee goods. Arr…. its so headache for us.But, we dont worry, because the men of all departments gov employees are have mouth for eat everything. Those are our custom & nature in Burma so longtime ago. Carry on my boys.
Reply natkhaung November 3, 2012 - 8:20 am ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်မှာ မှောင်ခိုကုန်ဆိုတာ ရှိသေးလို့လား ။ တွေ့ရင် ဖမ်းမဲ့အစား အခွန် ကောက်ပေါ့ ။
Reply pps12345 November 3, 2012 - 2:30 pm မလိုအပ်တဲ့ ကြိုးနီ စနစ်တွေကြောင့် မှောင်ခို ဆိုတာရှိနေတာပေါ့။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကြောင့်လည်း ဒီလို အသေးစား မှောင်ခို ဆိုတာ ရှိနေတာပေါ့။ ပိုက်ဆံ ရှိတဲ့ လူ ကျတော့ အိပ်စရေး ပျက်တယ်ဆို ပြီး အပျောက်ရိုက်ပြီးမှ ဆင်းရဲသား တွေ ကိုမှ ရွေးပြီး ဖမ်းတော့လည်း ………..အော် ဒုက္ခ
Reply kumudra November 5, 2012 - 12:28 pm နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ လူတဦးလျှင် ကျပ် ၄ သိန်းခန့်(အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀၀)သာ သတ်မှတ်ထားခြင်း ဆိုသည်မှာ ၊ မှတ်မိသမျှ နှစ်ပေါင်းများစွာမှဟု ထင်ပါသည်။
Reply Mon- Kayin November 6, 2012 - 4:04 pm အဆင်မပြေရင်မြ၀တီမှာ လာလုပ်စားကြပေါ့။ ဘယ်ဥပဒေ လာလာ ခဏပဲ ။
Reply james November 9, 2012 - 11:40 am အဲဒီဖမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ဌာနကလူတွေ စခန်းသိမ်းပြီး နေပြည်တော်ပြန်ရင် သူတို့ ကို အရင်စစ်ဆေးရပါမယ်၊ အဲဒီဌာနက အမှုထမ်း/ အရာထမ်းနေအိမ်ရယ်၊ ၀န်ကြီးဌာနမှာ သွားစစ်ရင် without ကားတွေ ၀န်ကြီးဌာနတွေ ဖြန့် ဖြူးလောက်အောင်ကို ရမှာသေချာပါတယ်